ကုမ္ပဏီသတင်းများထုတ်လုပ်သူများ - China Company News Suppliers & Factory
မေဒေးရောက်တော့မယ်၊ အားလပ်ရက်ဆန္ဒတွေကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကအလုပ်သမားတွေအတွက်ကြိုပြီးဒီမှာ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားနေ့သည်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်၌အမျိုးသားအားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်မေလ ၁ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ ၁၈၈၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် ...
Mind Chongqin ဌာနခွဲသည်နေရာအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
ချန်ဒူး-ချုံကင်းစီးပွားရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု၏အထွေထွေစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းနှင့်အညီအခွင့်အလမ်းသစ်များရရှိရန် MIND သည် ...
Mind သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အကောင်းဆုံးအရာများစက်မှုပေါင်းစပ်မှုနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအသုံးချမှုပရောဂျက်အဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်
21-03-16 တွင် admin မှ
မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်တတိယအကြိမ်စက်မှုလက်မှုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ဖရင့် (တရုတ်၊ ချန်ဒူး) ကို Chengdu အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုံ Jingronghui ရင်ပြင်ရှိအစည်းအဝေးခန်း၌အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤညီလာခံ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ“ ပေါင်းစည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အရာများထက်မြက်သောအင်တာနက် ...
အမျိုးသမီးများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံး elves များဖြစ်သည်။ မတ်လ ၈ ရက်သည်တရုတ်အမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်သည်။ ဒီအထူးအားလပ်ရက်ကိုကျင်းပဖို့ Mind ကုမ္ပဏီကအမျိုးသမီး ၀ န်ထမ်းအားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လက်ဆောင်လေးတွေပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ Mind ကုမ္ပဏီသည်လည်းအမျိုးသမီး ၀ န်ထမ်းအားလုံးကိုနေ့တစ်ဝက်အားလပ်ရက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ငါတို့ရိုးသားစွာ ...
၂၀၂၁ တွင် Mind ကုမ္ပဏီအသစ်စတင်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါ။ စမတ်ကဒ်စီးရီးများ: CPU ကဒ်၊ အဆက်အသွယ် IC ကဒ်၊ အဆက်အသွယ်မရှိသော IC ကဒ်/ID ကဒ်၊ သံလိုက်အစင်းကဒ်၊ ဘားကုဒ်ကဒ်၊ ကုတ်ကတ်၊ crystal ကဒ် စမတ်လက်ပတ် ...
၂၀-၁၂-၂၆ တွင် admin မှ
ပရောဂျက်နောက်ခံ: ၀ ယ်သူသည်တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးဝါးကုန်ကြမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် ၀ ယ်ယူပြီးနောက်တိုက်ရိုက်ရောင်းချသောစက်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အနာဂတ်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငွေကြေးဖိအားပိုများလာလိမ့်မည်။ ဒီပရိုဂရမ်မှာ ...